Posted by ကိုထွဋ် at Saturday, November 10, 20124comments:
ဘလော့မရေးတာလဲ ကြာပေါ့.. ကြာပေါ့ဆို.. အလုပ်များတယ်.. အလုပ်နဲတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်ပြောင်းတယ်.. အခု လက်ရှိ အလုပ်ကလဲ အထိုင်မကျတော့ အင်တာနက်လဲ မသုံးဖြစ်သေး.. အဲ့လာနဲ့ ကြာကြာလာတာကနေ. ပို့စ်မရေးဖြစ်တာ သုံးလတောင်ကြာပီပေါ့။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကုန်ကြမ်းပေါ့နော်.. ကျနော့်ရဲ့ကုန်ကြမ်းဆိုတာကလဲ သူများတွေလို ရင်ထဲ နှလုံးထဲကနေ ထွက်လာတာ မဟုတ်ပဲ.. သူများတွေကို လှောင်ဖို့ ဗျင်းဖို့ ရှာတဲ့ ကုန်ကြမ်းပါ။ အခုတလော ရှာလို့ကလဲ မတွေ့ဘူးပေါ့လေ.. တွေ့ရင်ပြောကြပါဦးဗျ.
စိတ်လဲ မပါဘူး. ပျင်းနေတယ်.. ကိုယ့်ဘလော့ကလဲ အဂ္ဂမဟာ စီနီယာ ဘလော့ဂါများကဲ့သို့ လူ တစ်နေ့ကို ရာကျော် ဝင်နေတာမဟုတ်တော့လဲ.. မရေးတော့ဘူး.. ပိုပိုပျင်းလာတယ်.. အားပေးမဲ့လူမှ မရှိတာကိုးဂျ............နော်..
ကျနော်ဘလော့ စရေးခါစက ကော့မန့်တစ်ခု မှတ်မိတယ်.. ဘလော့စရေးတယ်ဆိုတာ မိန်းမရခါစလိုပဲတဲ့ အချိန်ပြည့် ကြည့်ချင်တယ်.. ဘယ်သူ ကော့မန့်ရေးလဲ သိချင်တယ်.. ဘယ်နှစ်ယောက်လာဖတ်သွားလဲ သိချင်တယ်..
နဲနဲကြာလာတော့ မိန်းမကို မကြည့်ချင်တော့သလိုပဲ.. ဘလော့ကိုလဲ ပစ်ထားကြတယ်.. ရေးချင်ရေးတယ်.. မရေးချင်မရေးဘူး..
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ ဖဘခေါ် ဖေ့ဘုတ်ပေါ့။ ကျနော် တော်တော်များများဖတ်ကြည့်ရင် ဖဘ ဘက်ရောက်လို့ စာမရေးနိုင်ကြတာကြီးပါပဲ..
ပျင်းလို့ချရေးလိုက်တဲ့ ပို့စ်တစ်ပုဒ်ပါ.. ပျင်းလို့ ဘာမှဆက်မရေးချင်တာနဲ့တုံးတိနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါတယ်း)
Posted by ကိုထွဋ် at Tuesday, October 02, 20127comments:
၂၀၁၂ အတွက် အယူတော် မင်္ဂလာ ခြောက်လ ဟောကိန်းကြီး
အကျနုပ်သီ နိုင်ဂံရပ်ခြားတွင် အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း မြန်မာ လူမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဗေဒင်၊ကဝိ၊ဝေဒ ဘာညာ ဘာညာ စသည်များအား စိတ်ဝင်စားမိသည်။ ထို့ကြောင့် အတန်ငယ် လေ့လာလိုက်စားသည့်အားလျော်စွာ အနည်းအကျဉ်း တီးခေါက်မိ၏။ ထို့သို့တီးခေါက်မိသည်နှင့် မြင်မြင်သမျှ လူများအား တွေ့သည်နှင့် "ဟိုနားက လုကြီး စစ်သူကြီး" "အောင်ပန်း စိန်သာ ခွေးသေးပန်း " စသည့်နည်းလမ်းများဖြင့် မဟာဘုတ်(Mahar boat မဟုတ်ပါ) တိုင်ထူခြင်း. ဇာတာ ချခြင်းများကို လူသောက်မြင်ကပ်လောက်အောင် ပြုလုပ်နေသည် ကြာမြင့်လှပီဖြစ်သည်။ ယခု အချိန်အခါတွင် ကျနုပ်သည် အကျနုပ်ကိုယ်ကျနုပ် ပညာရည် အနည်းငယ်ပြည့်ဝပီ ဟု ယူဆသဖြင့် အောက်ပါဟောကိန်းကို ရေးရန်ကြိုးစားမိလေသည်။
ထို့သို့ ရေးရန်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာ ကျနုပ်၏ ဂျုနီယာများဖြစ်ကြသော ဆန်ဆာပြာဘို ၊ ဆင်ယော်ပြာ စသော ဂျုနီယာများက စာအုပ်ရေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေဖြောင့်နေသည်ကို အားကျမိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အောက်ပါဟောကိန်းသည် လက်တည့်စမ်း အဲလေ ကျနုပ်ပညာကို အမြည်းသဘောမျှသာ ပြချင်သောကြောင့် ခြောက်လဟောကိန်း ဟုဆိုရခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနုပ်၏ သူတစ်ထူးမတူသော ဗေဒင်ပညာနှင့် ဆန်းစစ်ကြည့်ရာ ၂၀၁၂ သည် နှစ်သစ်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်ကို အံသြဖွယ်ရာတွေ့ရှိရသည်။ ထို့အတူ ဂျိုးငှက်လေးတစ်ကောင်သည် ဟိုဒီပျံသန်းရာမှ သစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းကောက်ချီမိသဖြင့် ညိမ်းချန်းရေးတမန်တော် ဖြစ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့် မသင့်မြတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ရန်စောင်လာနိုင်ခြင်း၊ ရန်သူများက ENEMY အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်း ၊ နယ်နမိတ်များ ဖွင့်ထားရာမှ ပိတ်သွားခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။
၂၀၁၂ သည် ပညာရေးတွင်ထိပ်ဆုံးရှိသဖြင့် ပညာရှာသူများ စာကြိုးစားပါက စာမေးပွဲအောင်နိုင်သည်။ မကြိုးစားပါက ကျနိုင်သည်။ ဘာသာရေးလုပ်သူများ ပုတီး တစ်နေ့ အပတ်တစ်သောင်းစိတ်ပါ။ ရလဒ်မှာ အညောင်းမိနိုင်သည်။ ခြေထောက်တွင် အသားမာတက်နိုင်သည်။ ကဘာ တစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လည်း စီပွားရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်။ အလုပ်လုပ်သူများ လကုန်လျှင် လစာရမည်။ ကံကောင်းပါက ဒီဇင်ဘာလတွင် ဘောနပ်ရနိုင်သည်။
အထူးခြားဆုံး အချက်မှာ အနောက်တောင် အာရှနိုင်ငံတစ်ခု တွင် အစိမ်းရောင် ငွေစက္ကုတစ်ရွက် ပေါ်ပေါက်လာမည်။ နောက်ခြောက်လအတွင်း မပေါ်ပေါက်ပါက တစ်နေ့နေ့ ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်။ထိုငွေစက္ကုသည် ဝိတ်မလောက (သို့) သိုက်စသော စာကလေးသိုက် ၊ငှက်သိုက်တိုနှင့် ဆက်စပ်၍ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပေသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း ခြောက်လကာလတွင် သဘာဝသတ္ထုများတူးဖော်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ မြေကြီးထဲသို ကျင်းတူးပါက ဓာတ်ခဲ အစုတ်အပြတ်များ ၊ သံချေးတက်နေသော သံတိုသံစ စသည်တို့ တွေ့ရှိနိုင်သည်.။ မည်သည့်ကိစ္စမဆို ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ ရန်ကုန်တွင် ဂျိုးဖြုရေလာနေရာမှ ရုတ်တရက် ဂျိုးဖြုရေ ပြတ်သွားခြင်း၊ မျက်စိမှတ်ပါက မှောင်မည်းသွားခြင်း တို့ဖြစ်နိုင်သည်.။ ၂၀၁၂ သည် အကောင်းအဆိုး ဒွန်တွဲနေရာ ပညာရေး ဘာသာရေး လုပ်သူများအဖို့ ထိပ်ဆုံးရောက်နိုင်သည်။ သို့သော် မကောင်းသော အပြောင်းအလဲများလည်းရှိသည်။ ဥပမာ မိုးတွင်းတွင် မိုးသဲသဲမဲမဲ ရွာခြင်း ၊ မိုးတွင်းဖြစ်သော်ငြား နေထွက်ခြင်း ၊ ည ရှစ်နာရီဆိုပါက နေလုံး မမြင်ရခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ၂၀၁၂ ၏ အထူးခြားဆုံးကို ဒေါက်ကနဲဒေါက်ကနဲ ကောက်ချက်ချရမည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်တွင် ကြက်ဆူဆီမီးဖို တီထွင်ခဲ့သကဲ့သို့၎င်း ၊ သစ်ဆိမ့်ဆီ ထုတ်လို့ရပီဟူ၍ လည်းကောင်း ထို့ကဲ့သို့ တလွဲဆံပင်ကောင်း ဖြစ်ရပ်များပေါ်ပေါက်လာမည်ဖြစ်သည်။၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လိမ္မော်သီး အရေးအခင်းကဲ့သို့သော် ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့ လူ၏ပယောဂကြောင့်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်သေးသည်။ ယခုတချို့ပင် ပေါ်ပေါက်နေပီဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ အားခြုံငုံ၍ ပြောရမည်ဆိုလျှင် ကောင်းချင်လည်းကောင်းမည်၊ဆိုးချင်လည်းဆိုးမည် ဖြစ်သော
နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ကြောင်း အကျနုပ် နမိတ်ဖတ်လိုက်ပေတော့သတည်း။
အကျနုပ်၏ တပည့်ရေးထားသော နမိတ်စာတမ်းအား ဖတ်ရှုလိုပါက ဒီမှာ ကလစ်ပါ ။
ဗျစ်တစ်ပြန် ဗေဒဝိတ်ဇာကလိမ် ဆရာကြီး
Posted by ကိုထွဋ် at Friday, June 08, 20129comments:
Posted by ကိုထွဋ် at Wednesday, May 23, 2012 17 comments:
“စင်္ကာပူ။” ခြင်္သေ့ဟာ ခြင်္သေ့လိုမနေတဲ့ မြို့။. လူကိုလူလို့မမြင်တဲ့ လူတွေနဲ့ မိုးမျှော်တိုက်တွေ ထိုးထိုးထောင်နေတဲ့ မြို့။. ... ပလီပလာနိုင်...
ကျနော့်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်လေး ဟုတ်တယ် ကျနော့်နေတဲ့ အခန်းမှာ ပြတင်းပေါက်လေးတစ်ခုရှိတယ်. ကျနော်နေတဲ့ အခန်းဆိုတော့ လောလောဆယ် ကျနော်ပိုင်တာပေါ့နော...
ကျနော်လဲ ပျင်းတာက တစ်ကြောင်း ကုန်ကြမ်းမရတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် စာတွေမရေးဖြစ်ဘူး။ နောက်တစ်ချက်က ဖဘမှာပျော်မွေ့နေတာလဲ ပါတာပေါ့လေ။ အခုတော့ ကျနော်...
အလိုမကျမှုတွေများနေတယ်။စိတ်ကလဲ ကယောက်ကယက်နဲ့ အလုပ်ထဲလဲ စိတ်မပါ။ အခုလုပ်ချငနေတာက သဲအိတ်တစ်လုံး ကို အားရပါးရထိုးပစ်ချင်တယ်။ အဲဒါဆို အလိုမကျမှုတေ...
အကျနုပ်သီ နိုင်ဂံရပ်ခြားတွင် အလုပ်လုပ်နေသော်လည်း မြန်မာ လူမျိုးတစ်ဦး ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဗေဒင်၊ကဝိ၊ဝေဒ ဘာညာ ဘာညာ စသည်များအား စိတ်ဝင်စားမိသည...
အမူးသမားများ မူးနည်း (အပိုင်းနှစ်)
(၂၁) လဒမှုး - မှုးလာလေလေ မှိုင် လာလေလေ ဖြစ်လာသူ**** ** ** (၂၂) တောခွေးမှုး - မှုးလာပြီး ဘော်ဒါစုံပါက အဖွဲ့အားကိုး နဲ့ မိုက်ချင်သူ**** ...